Xildhibaan maamulka gobolka BANAADIR ku taageeray arrin shacabka Xamar ay dhibsadeen | Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan maamulka gobolka BANAADIR ku taageeray arrin shacabka Xamar ay dhibsadeen
Xildhibaan maamulka gobolka BANAADIR ku taageeray arrin shacabka Xamar ay dhibsadeen
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo maalmo un ka hor uu Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf ku dhawaaqay in Maamulkiisa uu dib usoo celin doono qaadista Canshuuraha ayaa waxaa arrintaasi taageeray Xildhibaan ka tirsan BFS.
Xildhibaan Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kamid ah Mudanayaasha sida aadka ah uga faalooda Siyaasada Somalia, ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah ay Dowlada Hoose u leedahay qaadista lacagaha Canshuurta.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uusan shaqeyn karin haddii aan la helin lacagaha kasoo xarooda Canshuurta waxa uuna Tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay bixiyaan lacagahaasi.
Axmed Ducaale Geelle waxa uu farta ku goday inuu la socdo inay jiraan caqabado shacabka ka heysta dhanka lacagahaasi Canshuurta ah maadaama ay isugu jiraan kuwo danyar ah iyo ku dhaqan, balse waxa uu ku taliyay in dhaqaalahaasi laga qaadayo shacabka aysan ku dhicin jeebka shaqsiyaad gaar ah oo loo baahan yahay inay gasho Bangiga dhexe.
Wuxuu carab dhabay inay jiraan Canshuur laga qaado shacabka balse aan loo jarin wax boono cadeyn u ah in lacagtaasi laga qaaday, waxa uuna taasi ku sheegay mid Maamulka looga baahan yahay inay xal u helaan.
Xildhibaanka ayaa ka digay in Maamulka Gobolka uu ku tagri fallo lacagahaasi canshuurta ah, waxa uuna ku taliyay in loo maareeyo si sharciga waafaqsan.
Haddalka Xildhibaanka ayaa imaanaya iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socto howlo canshuur uruurin ah, inkastoo lacagahaasi canshuurta ah aysan ku dhicin qasnada DFS.